Montpellier – Taxanaha 89 – 90 – Qaybta Koowaad - Caasimada Online
Home Warar Montpellier – Taxanaha 89 – 90 – Qaybta Koowaad
Muqdisho (Caasimada Online)-1989 ayaan waxbarasho kooban u tegey dalka Faransiiska. Waxaan tegey Jaamacadda Paul Valéry ee magaalada Montpellier.
Wuxuu ahaa Kacaan dhiig badani ku daatay. Taariikhyahannada qaar ay ku tilmaamaan dhacdooyinka ugu waaweyn ee dunida in uu ka mid ahaa. Ma ahayn in Boqor Louix XV1 la dilay oo keliya. Ma ahayn oo keliya in Boqortooyadii Faransiiska lagu beddelay Jamhuriyad.
Laakiin 14-ka Luulyo markii aan gaarnay waxay noqotay in aan maskaxdeennu u soo jeedin Kacaan Faransiiska oo dhacay 200 oo sano ka hor iyo damaashaadka hadda loo sameynayo. Magaalo iyo dal qalbigeenna meesha ugu muhiimsan uga yaal ayaa hadda qalalaase ka taagan yahay. Muqdisho ayaa la isku dilayaa.
Bannaanbaxa waxaa ka dhalatay Rabshad. Bannaanbaxayaasha iyo ciidanka Dowladda ayaa foodda is daray. Ciidanka waxay fureen rasaas. Waxaa la rasaaseeyay dadkii bannaanbaxayay ayaguna dhagxaan ayay la dhecayeen ciidanka amniga. Wararka qaar ay sheegayeen in shacabka bannaanbaxaya ay ku soo dhex dhuunteen dad hubeysan. Dhimashada iyo dhaawaca ka sokow, dad badan ayaa xabsiga loo taxaabay.
Wararka qaar waxay sheegeen in dadka dhaawaca ahi aanay isbitaal tegi karin, baqdin ay ka qabaan in la xiro awgeed.